Fitaovana fanaka mahazatra mahazatra | James Bond
Manana mihoatra ny 20 fivarotana fanaka mahazatra any Chine isika. Ny fanaka mahazatra anay dia mety ho an'ny fianakaviana, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, klioba sns., Ny fanirianay dia ny mivarotra fanaka klasika tsara tarehy amin'ny firenena maro kokoa!
Ny villasy tsara tarehy sy tsara tarehy dia mila mifanentana amin'ny fanaka mahazatra amin'ny tsiro sy ny haitraitra mitovy. Misaotra an'ireo mpanjifan'ny Nizeriana noho ny fahatokisan'izy ireo sy ny fitiavany an'i James Bond Furniture, manana ny tantaran'ny 36 taona ny orinasa anay. Ny dingana famokarana dia tena matotra ary tena tsara ny kalitao.Ny fanaka mahazatra an'i James Bond Furniture dia amidy amin'ny firenena 35 samihafa, mirakitra fianakaviana tsara tarehy 5000. James Bond Furniture dia lasa iray amin'ireo marika fanaka 10 mahazatra mahazatra any Chine sy ny marika fanaka 20 mahazatra amin'ny tany eto an-tany. Manantena aho fa betsaka kokoa ny mpanjifa afaka misafidy ny fanaka mahazatra mahazatra kalitao avo lenta!
Italiana clonite Villa Clraic Fivavahana - Avy amin'i James Bond Furniture
Misaotra ny mpanjifatianina italiana noho ny fanohanany sy ny fitiavan'i James Bond Furniture. Tena za-draharaha amin'ny famokarana fanaka mahazatra izahay, satria manana traikefa 18 taona izahay, ary nampidirina milina famokarana italiana sy teknolojia famokarana italiana ihany koa izahay. Mampihatra ny hoso-doko amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ara-tontolo iainana, mampiasa ny akora ambony kalitao avo lenta, ary ny 15 taona dia niaina ny fanamboarana fatratra ny mpanao asa soaJames Bond Furniture dia any amin'ny firenena maro be toa azy, ampiasaina, hanohy hiasa mafy isika, hanohy ny famokarana fanaka mahazatra kokoa mba hanomezana mpanjifa bebe kokoa!
TOROHEVITRA MANGALATRA ALOHA
Voalohany indrindra dia tiako ny misaotra ny mpanjifa afrikana atsimo noho ny fanohanan'izy ireo, ary koa ny fanohanany sy ny fitiavantsika ny fanaka Jameson. Ity fanaka mahazatra manaraka ity dia nomen'i James Boath Furniture, ny fanaka mahazatra mahazatra kalitao avo lenta dia namidy tany amin'ny firenena 35. Izahay koa dia manandrana mamela ny mpanjifa bebe kokoa any amin'ny firenena maro kokoa no mahafantatra ny fanaka James Bond Furciture sy ny fanaka mahazatra amin'ny tsiro sy ny haingon-trano.
Ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa no hery manosika lehibe indrindra anay. Ny iraka ataontsika amin'ny famolavolana, mamokatra ary mivarotra fanaka mahazatra amin'ny fontsika. Isaky ny tena tsara isika hamita ny asa nomen'ny mpanjifa anay sy ny tsara tarehy, ny tsara tarehy, avo lenta, sarobidy ary ny kanto amin'ny fanaka mahazatra mahazatra amin'ny fianakaviana tsara tarehy.Ny fanaka Bon Bond Furniture dia manana tantara 36 taona, matotra ny teknolojia famokarana, mihamalalaka hatrany ny teknolojia, mifidy fanaka mahazatra mahazatra, James Boath Furniture dia tena tsara safidy!
Tetikasa mpanjifa holandey - Fitaovana mahazatra avy amin'ny Fotom-boninkazo Bok Bond
Ny sofa mahazatra voafidin'ny mpanjifa holandey dia ny fomba tsara indrindra amin'ny famokarana an'i James Bond Furniture. Varotra nandritra ny 18 taona izay, ary ny foto-kevitra volavolan-dalàna dia avy amin'ny rojo ilay vehivavy tsara tarehy. Ny endrika dia tsara tarehy sy matsiro. Miaraka amin'ny toppings Italiana premium nofonosina tondraka, tena sarobidy izy io, safidy tsara izany!Ny mpanjifa Holandey dia nampiasa latabatra haingon-trano roa, izay mety hilalao fiantraikany tsara indrindra, ka ny toerana manokana dia toa misy rivo-piainana!
Tetikasa mpanjifa any Berlin, Alemana - James Bond Furniture Production
JAMES BON FORONANA, Taorian'ny fiezahana 18 taona. Lasa iray amin'ireo marika fanaka folo lehibe indrindra any Shina sy ny marika fanaka roa lehibe indrindra eto an-tany izahay. Faly be izahay fa betsaka ny mpanjifa avy amin'ny firenena samihafa no nifidy ny fanaka nataontsika. Izahay koa dia hanome fanaka mahazatra sy kalitao avo lenta ary serivisy tsara amin'ny mpanjifa.
Tetikasa mpanjifa ao Burma - Avy amin'i James Bond Furniture
James Bok Fediture dia niasa mafy hanatsarana ny haavon'ny antsipirihany momba ny vokatra, afaka namokatra fanaka mahazatra mahazatra izahay, dia ampiasain'ny fianakaviana maro any amin'ny firenena 35. Saingy mbola mandeha any Italia isan-taona isika mba hanana fifanakalozana fifanakalozana ara-pianarana izay manana asa tanana tsara indrindra, mba hitondrana fanaka tsara kokoa amin'ny mpanjifa, avelao izy ireo, avelao izy ireo ho romotra!
Tetikasan'ny mpanjifa Shanghai - fanaka kilasika avo lenta avy amin'ny fanaka James Bond
Ny trano vaovao an'ny mpanjifan'ny Shanghai dia vokatra avy amin'ny andian-dahatsoratra fanaka James Bond. Ny palitao sofa faran'izay marevaka manga dia ampiasaina, ary ny seza fisakafoanana klasika mitovy loko aminy dia mifanaraka. Ny farafara mahazatra ao amin'ny efitrano fandriany koa dia tena mahay.James fanaka fanaka dia ny safidin'ny olona mahomby, avo lenta, fanaka kilasika miaraka am-bolo, afaka mampitombo be ny rivotra iainana ao an-trano sy ny fahaizana ary ny zon'ny tompony!
Tetikasa mpanjifa Maleziana-fanaka kilasika avo lenta avy amin'ny James Bond Furniture
Ny mpanjifa Maleziana dia tena afa-po amin'ny fanaka kilasika avo lenta nomen'ny fanaka Jameson. Izy koa dia naka sary ny vokatry ny fanaka Jameson ao an-tranony. Ny vokany dia tena tsara tokoa, miampy ny haingo kanto eropeana an'ny mpanjifa, miampy ny tsy fitovizan'ny jiro iray manontolo, andao isika James Bond fanaka kilasika dia ho lasa tsara tarehy kokoa, koa satria misy ny fahatsapana ny lafiny telo, ny fahatsapana lanja, fahatsapana kanto amin'ny fanaka kilasika James Bond hanatevin-daharana azy, ny tranon'ny mpanjifa any Malezia dia niova tamin'ny fomba hafa, nanjary rendrarendra, lasa kanto, lasa tantaram-pitiavana!
Tetikasa mpanjifa UK-Avy amin'ny fanaka James Bond Classic
James Bond fanaka any amin'ny firenena samy hafa eran'izao tontolo izao, tanteraka tanteraka ny tetikasa iray taorian'ny iray hafa, mpanjifa maro no nampiasa ny fanaka kilasintsika dia tena faly, mahatsapa ny serivisy avo lenta sy avo lenta. Ny fanoloran-tenantsika sy ny fitiavantsika ny fanaka kilasika tsirairay dia tsy azo eritreretina, ary sarotra ny mamaritra an'io fihetsika sy fifikirana io amin'ny teny!
Ny mpanjifa any Beijing dia mifidy fanaka kilasika avo lenta an'i James Bond
Ny fanaka kilasintsika dia amidy any amin'ny firenena 35, manarona trano tsara tarehy mihoatra ny 10.000. Hamboarinay tsara ny fanaka kilasika tsirairay, ny fanaka kilasika ho lasa kanto iray. Manantena aho fa fianakaviana maro kokoa no afaka mampiasa ny vokatra avo lenta, ny vokatra azo tsiro, ny vokatra fanao, ny vokatra azo avy amin'ny fanaka James Bond!
Tetikasan'ny mpanjifa any Malezia
Ny trano vaovao ho an'ny mpanjifa Maleziana dia tena tsara tarehy, miaraka amin'ny fanaka fanaka kilasika James Bond, dia ho bebe kokoa ny rivotra iainana ary hirindra kokoa. Ny fanaka kilasika James Bond dia manana traikefa nandritra ny 18 taona tamin'ny famokarana fanaka kilasika, taorian'ny ezaka be dia be, lasa fanaka kilasika folo ambony izahay ary fanaka kilasika malaza eran-tany! Mividiana fanaka kilasika avo lenta, safidy tsara ho an'ny rehetra ny fanaka James Bond!Satria matihanina izahay, satria mandinika ny antsipiriany, satria mandinika ny serivisy, satria mitsabo tsara ny mpanjifa rehetra izahay!